Home News Axmed C. Samoow: “Waxaa la igu amray in aan mushaar joogta ah...
Axmed C. Samoow: “Waxaa la igu amray in aan mushaar joogta ah siiyo Siyad M Shire iyo Abdishakur Mire iyo Xildhibaano”
Axmed Samoow oo dhawaan laga ceyriyay Dekada Magaalada Muqadishu iyada oo lagu soo eedeyay in uu ku kacay musuq maasuq ayaa afka furtay. Samoow oo ahaa Madaxa Canshuuraha ee Dekada magaalada Muqadishu ayaa ahaa wiil uu meesha geeystay Xassan Cali Kheyre si uu ugu adeego. Samoow ayaa sheegay in RW Xassan Cali Kheyre uu isaga ku amri jiray inuu lacag siiyo xildhibaano iyo qaar ka mida saaxibadiisa. Waxa uu yiri “ …mar marka qaar RW Kheyre waxa uu i soo wici jiray subaxda hore markaas ayuu waxa uu igu dhihi jiray, hebel iyo hebel ayaa maanta kuu imaanaya” waxa uu ku daray “ waxaana isla sameeysanay baaq la isku garto oo sheegayo lacagta aan siinayo shaqsigaas inta ay la egtahay”.
Dhanka kale Samoow ayaa sheegay in Dekada laga siiyo mushaar joogta labada shaqsi Siyaad Maxamud Shire iyo Cabdishakur Cali Mire oo aan wax shaqo ah u qaban dekada. Lacagta joogta ah oo ay ilaa hadda ka qaataan Dekada bishii waa $10,075. (toban kun ito 75 doolar). Lacagtaan mararka qaar waxaa loo bixiyaa si toos ah iyada oo la soo marinayo Maareeyaha Dekadda Axmad Washington, mar marka qaarna lacagta waxaa si toos ah loogu diraa meelo ay uaga sheegtaan tusaale Siyaad waxa uu codsadaa in xaaskiisa ooRaxama ku nool magaalada Neyroobi in si toos ah loogu diro $5,000 bil kastaa halka inta soo hartaana uu isaga si cadaan ah gacanta loogu galiyo hadii uusan joogin waxaa loogu diraa xawaalada TAJ. Waxaa MOL dhawaan idinla wadaagi doontaa cadeymo lacagaha laga dhaco dekadda magaalada Muqadishu.
Samoow ayaa ku daray intaas in labadaan shaqsi horay loogu iibiyay labo baabuur oo ah baburta aan xabadda karin waxaana aramkeeda lahaa Maareeyaha Dekadda Axmad Washington. Baabuurtaan ayaa waxaa laga iibiyay ganacsade Nuur Cali Buubaa iyada oo lacgtiisa si cadaan ah loo siiyay. Dhanka kale Samoow oo ah nin dhalinyaro ah oo aan aqoon badan lahayn ayaa in ka yar labo sano waxaa uu magaalada Muqadishu ka iibsaday hanti aad u badan. Mar hadii hogaankii dalka dhacaya hantidii qaranka maxaad ka filanaysaa wiil yar oo shaqaale ka ah dowladda.
Iyadda oo ay dowladda sheeganayso in ay bilaawday la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa hadana waxaa socda boobka hantida qaranka ah oo uu hogaanka u hayo RW Xassan Xassan Cali Kheyre.
Previous articleWasaradda Warfaafinta oo cabsi soo wajahday iyo baaritaan saaka lagu sameeyay
Next articleKooxda Al Shabaab Oo Dagaal Culus Ku Qaaday saldhig Ciidanka Dowladda ay ku leeyihiin Gobolka Baay
Farmaajo oo damacsan Mudo kororsi iyo Xildhibaano Afka-furtay (Aqriso)
Madaxweynahii Hore ee Masar oo la Aasay Saacado ka dib Geeridiisa